‘क्वाड कोप्टर’को सफल परिक्षण गरेका कपिलको कलाले सबै चकित [फोटोकथा र भिडियो]
-कपिल ज्ञवाली/बुटवल साउन १७ । बुटवलका एक युवकको कलाले सबै आश्चर्य चकित बनेका छन् । बुटवल १३ देवीनगरबस्ने १४ बर्षिय कपिल ज्ञवालीले क्वाड कोप्टर विमान बनाएर सबैलाइ आश्चर्यमा पारेका छन् । उनले बनाएको नया प्रोजेक्ट ‘क्वाड...
जो पुरुषहरु महिलाका वक्षस्थलमा आँखा लगाउँछन् …
अध्ययनहरुले बताएका छन् की पुरुषहरु महिलाका वक्षस्थल प्रति सबैभन्दा बढि आकषिर्त हुन्छन् । अब पुरुषहरुलाई महिलाका वक्षस्थलमा नजर पूराउने नयाँ बहाना मिलेको छ । एक अध्ययन अनुसार महिलाका वक्षस्थल हेर्नाले पुरुषको आयु बढ्दछ । न्यू...
पुरुषका लागि खुसिकाे खबर, अब पिसाब फेर्ने कण्डम !
नागरिक आवाज/ । कतै हिँडेको बेला पिसाबे चेँप्यो तर पिसाब गर्ने ट्वाइलेट छैन । गाडि चलाइरहेको बेला जाममा फसियो तर पिसाबले निकै चेँप्यो । घरमै भएको बेला पनि बारम्बार पिसाब लागिरहन्छ तर विभिन्न कारणले ट्वाइलेट सम्म...
जान्नुस् महिलाकाे बक्षस्थलबारे राेचक तथ्यहरु
एजेन्सी /बैसाख १४ । महिलाहरूप्रति पुरूषहरू सहजै आकर्षित हुन्छन् । त्यसमा पनि महिलाको वक्षस्थलबाट पुरूषहरु झनै आकर्षित हुन्छन् । विभिन्न संस्थाहरुले गरेको अध्ययनमा प्राय पुरूषहरूको आँखा महिलाको स्तनमा पर्ने गर्छ । वक्षस्थल महिलाको सौन्दर्यको एक...
जानीराख्नाेस् कण्डमको सही प्रयोग कसरी गर्ने ?
नागरिक आवाज/ चैत्र काठमाडाैं । सुरक्षित यौन व्यवहारका लागि कण्डमलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, यसको सहि प्रयोग गर्ने बारेमा भने सबैमा पर्याप्त जानकारी नहुन सक्छ । जसले गर्दा यौन व्यवहार असुरक्षित बन्न सक्छ । परिवार नियोजनका...
काठमाडाैं ,फागुन । मानव यौन गतिबिधि जटिल भए पनि यसको सामना गर्नु जरुरी छ । सम्भवत खानाको स्वाद जस्तै सेक्सको पनि आसन र समय हुन्छ । सेक्सका समयमा साना तिना गल्ती भइरहन्छन् । हाम्रो खाना पकाउने...
समुद्री तटमा अजंगको ह्वेल माछा लम्पसार
१५ माघ, काठमाडौं । मुम्बईको लोकप्रिय तथा चहलपहलयुक्त जुहु समुद्रीतटमा शुक्रबार बिहानै रमिता भयो । त्यहाँ एउटा ३० फिट लम्बाईको ह्वेल माछाको मृत शरीर लम्पसार परिरहेको थियो । शुरुमा त मानिसहरु झस्किए । तर मरिसकेको थाहा...
-कपिल ज्ञवाली/ १४ मंसिर, बुटवल । सर्पको राजाको रुपमा चिनिने तथा नेपालमा दुलर्भ मानिएको राज गोमन (किङ्ग कोब्रा) लाई स्थानीयले मारेका छन् ।पाल्पा र नवलपरासीको सीमाना गोठादी नजिकको जंगलमा देखापरेको सर्पलाई स्थानियले मारेका हुन् । उक्त...
डिभोर्स सम्बन्धी विश्वका केही अनौठा नियम कानुन जानाैं
पति पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद अर्थात् डिभोर्स आफैमा अप्रिय घटना हो । डिभोर्सको विषयमा दुनियाका विभिन्न देशमा विभिन्न खाले चलन तथा नियम कानुन रहेका छन् । कतिपय देशहरु डिभोर्सका मामिलामा बढि महिलामैत्री छन् भने कतिपय देशहरुले...
महिला खेलाडीहरुले निर्वस्त्र भएर लोभलाग्दा पोज दिएपछि…(फाेटाेफिचर)
एजेन्सी । महिला हक्की टिमका खेलाडीहरुले एउटा क्यालेन्डरका लागि भन्दै सामुहिक रुपमा निर्वस्त्र भएर लोभलाग्दा पोज दिएका छन् । बेलायतको लान्काशायरस्थित सेन्ट एन्नेस हक्की क्लवमा १४ महिला खेलाडीहरुले नग्न फोटोसुट गराएका हुन् । लिथाम स्पोट्र्स...
दुँनीयाकी सबैभन्दा सुन्दर ह्याकर यस्ती छन्
एजेन्सी ,असाेज । हालसालै अनलाइन डेटिगं साइड एस्ले मेडिसिनलाई एक सुन्दरीले ह्याक गरिदिएकी छिन् । उनले यस साइडमा भएका मानिसहरुको गोप्य जानकारी समेत हासिल गरेको बताइएको छ । उनि दुँनीयाकी एकदमै सुन्दर ह्याकर भएको एजेन्सीहरुले बताएका...
फेसबुक ह्याक भो, अब धन्दा नमान्नुस् यसाे गर्नुस्
काठमाडाै‌ं,भदौ । यदि तपाईको फेसबुक एकाउन्ट कसैले ह्याक गर्‍यो भने के गर्नुहुन्छ ? यसलाई फिर्ता लिन धेरै कठिन छैन । आउनुस्, उपाय थाहा पाउनुस् । सबैभन्दा पहिले <https://www.facebook.com/hacked> मा जानुस् । यहाँ एउटा बटम देखिन्छ जसमा लेखिएको...
कैले देख्नुभएकाे छ ३ किलाेकाे लिङ्ग ?
एजेन्सी , भदाै १० । जर्मनीका एक पुरुषले लिङ्गमा सिलिकन भरेर ठूलो बनाउन खोज्दा झन् समस्यामा परेका छन् । उनले लिङ्गमा सिलिकन भर्नका लागि इन्जेक्सन लगाएका थिए तर इन्जेक्सनका कारण उनको लिङ्गको तौल बढेर तीन...
फेसबुकका संस्थापक जुकरबर्गले युवालाई यस्ता टिप्स दिए
भदाै ५ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण आत्मविश्वास र दृढता हो । युवावस्थामा हामीले बारम्बार सुन्नुपर्छ –तपाईंसँग अनुभव छैन । हामीलाई पनि महसुस हुन्छ, हामीभन्दा अनभव भएका मानिस धेरै छन् तर, सबैसँग सुरुमै अनुभव हुँदैन । मैले...